HomeWarqad Hordhac ahOlolaha Imaatinka Maraakiibta oo Bilaash ah
11 / 12 / 2019 Warqad Hordhac ah
Dalkeenna, waxqabadka gaadiidka waddooyinka iyo badda ayaa si aad ah u fiicnaaday iyadoo ay kordheen dhoofinta iyo soo dejinta, macna ahaan, waddankeenu wuxuu udub dhexaad u ahaa soo-jiidashada shirkadaha soo saara iyo shirkadaha gaadiidka. Nidaamka wax iibsiga ee ku saleysan webka, kaas oo ah mid ka mid ah shuruudaha lama huraanka u ah xilligan casriga ah, waxaa loo adeegsadaa dhinacyo badan oo waa mid aad waxtar ugu leh waaxda gaadiidka.
In kasta oo ay jiraan habab badan oo websaydh ah oo loo sameeyay si loo helo natiijada ugu yar ee keenida xamuulka iyo gaadiidka xamuulka ah ee udhaxeeya soosaarayaasha, dhoofinta iyo shirkadaha xamuulka qaada, Habka Maraakiibta ayaa ah mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee naqshadaha websaydhka. Tilmaanta Maraakiibta, oo leh astaamo badan oo kala duwan marka loo eego bogag la mid ah, ayaa si gaar ah u deg deg ah sababtoo ah hawlgalkeeda degdegga ah iyo, tan ugu muhiimsan, xubin ahaanta lacag la’aanta iyo xuquuqda xayeysiinta aan xadidnayn. shirkadaha dhoofinta iyo bogga xayeysiiska ugu badan ee loo adeegsado soo-saareyaasha.
Hagaha Maraakiibta, kaas oo ka kooban qaybo badan oo kala duwan oo goob-doon ah sida xamuul guri iyo gaadiid xamuul iyo gaari xamuul caalami ah iyo gaadiid konteynar ah. xamuul xamuul ah Iyada oo leh istiraatiijiyad ku habboon iyo qaab fudud oo qaab dhismeed ah, oo loogu talagalay in lagu heli karo iyada oo lagu riixayo xayeysiiska gawaarida madhan, waxay bixisaa natiijooyin qeexan natiijooyinka daraasadaha gaadiidka gudaha iyo kuwa caalamiga ah. Faahfaahinta kooxaha rarka ee la codsaday in la qaado waxaa lagu calaamadin karaa qaybo iyo astaamaha gaari ee la doonayo in lagu go'aamiyo wakhti kasta oo maalinta ka mid ah boggayaga si dhib yar looga gali karo kombiyuutarrada, kiniiniyada iyo mobilada mobilada wax badan ayaa ka tagay.
Hagaha Shixnadaha, oo ay ku shaqeeyaan shirkadaha saadka, shirkadaha wadaagga ah iyo shirkadaha xaddidan iyo xitaa shirkadaha haya ayaa leh hab fudud oo daabacan, ayaa had iyo jeer cusbooneysiiya naqshadeeyaasheena si ay u siiyaan adeeg aan dhammaystirnayn, aan xadidneyn dhammaan xubnaha iyo macaamiisha. Freight iyo gaari sarrifka waa magaca aan siino boggaga web noo noqon karaa oo kaliya si sahlan ka dhan qeybo ka mid ah dunida oo la heli karo, aan ka Turkey leh kaabayaasha xoog leh ayaa lagu soo bandhigay in Dooratay shirkada badan oo gudaha iyo dibadda maraakiibta iyo ganacsiga.
Cunto wargalin: Mersin Movers
Hel HGS ka socota Heerka Dhismaha Hel 1 Get Campaign Free
Wanaagsanaanta Calaamadaha Gaadiidka Gaadiidka
Gaadiidka gudaha, oo noqon doona wadada tareenka ee Ankara Kazan sanadka soo socda…
Ogeysiiska Qandaraaska: 2013 Lacagta Shakhsiyaadka ee Sanadka 4